Lane Switchers - Delta Engineering Belgium
Kaydso qaybta "Lane Wareejiyeyaasha"
Lane switcher - 1 ilaa 2 haad
Laydhkan toosan wuxuu u kala qeybiyaa 1 xariiqa soo galaya laba xariiq oo socda. Sidan, waxaad heleysaa xawaaraha dhalada ee ku habboon (oo aan ka badneyn xawaaraha dhalada ugu badan halkii layn).
Published in Lane Wareejiyeyaasha
Xawaaraha xawaaraha sare leh - 1 ilaa 6 haad
Wareejiyaha haadka wuxuu u qaybiyaa 1 saf oo soo galaya 6 khadadka baxaya. Sidan, waxaad heleysaa xawaaraha dhalada ee ku habboon (oo aan ka badneyn xawaaraha ugu badan ee dhalada layn kasta). Wadarta xawaaraha: 30-72K BPH!